Nanononfy aho tamin’ny alina, niditra tao amin’ny trano anankiray izay noheveriko fa tao ny namako no mipetraka. Kanjo, rehefa tafiditra aho, lasa trano ratsy be ilay izy, sady maloto, ny fandriana dia dongon-tany. Nisy vehivavy natory teo amin’io fandriana io, saingy olona tsy misy tongony na tanany, fa eo amin’ny tapany ambony amin’ny tratrany no miakatra ihany no misy. Dia nampandroso ahy izy ary dia niresaka taminy aho nampahery azy tamin’ny anaran’I Jesosy. Rehefa niresaka ela teo, akory ny hatairako fa niova tsikelikely izy, lasa olona ara-dalàna avy eo, nisy ankizy ary teo koa ny vadiny niaraka taminy.
Dia niteny aho hoe: “Eto amin’ity trano ity Jesosy amin’izao fotoana izao, satria niditra teto aho, tokantrano mahantra sy maloto ary olona sampona no hitako, hay tsy izany fa ireto ianareo olona tahaka ny olona rehetra. Tsy tian’I Jesosy hanavakavaka na iza na iza aho izany”.
Ry Havana malala, ry mpanompon’Andriamanitra, tandremo ny manavakavaka, indrindra ny manao tsinotsinona ny mahantra sy ny kamboty, fa mampalahelo an’I Jesosy. Rehefa any amin’ny toerana handehanantsika any amin’ny Tafika Masina any, aza mifidifidy trano hidirana na “mifindrafindra trano”; hoy Jesosy. Ny mpanao heviteny dia manazava izany tenin”I Jesosy izany fa “aza mitady –confort-“ any amin’ny toerana izay aleha. Mahereza!
Rehefa avy niantsena ity Ramatoa vavy antitra iray, no hiditra ny fiarany izay nipetraka teo amoron-dalana, no indreo nisy olona efatra nipetraka tao anaty fiarany. Rehefa nahita izany izy dia tsy nisalasala namoaka ny basiny, nanambana sy nandrahona an’ireo lehilahy ireo nanao hoe: “Mivoaha haingana ry ilay tsy vanona ireto a, raha tsy te ho faty, dia lasa mandeha”.
Dia nivoaka izy efa-dahy sady nanangan-tanana; no lasa nitsoaka, tsy sahy niteny akory.
Dia niditra ramatoabe, nampiditra ny lakile fa tsy tafiditra, noho ny tebiteby angamba nahazo azy teo.
Rehefa ela ny ela nivoaka izy naka saina, no hitany fa hay tsy fiarany ity nidirany fa an’olon’kafa. Teo izy vao nijerijery, hay fiara mitovy, fa ilay an’azy nipetraka soa aman-tsara tsy lavitra teo.
Koa satria olo-marina izy, dia lasa nandeha izy, niaraka tamin’ilay tena fiarany tany amin’ny Polisy nitantara ny zava-nisy. Rehefa niresaka tamin’ny polisy nandray azy izy, toran’ny hehy ity farany, raha nandre izany. Ary indreo hitany, raisin’ny polisy anankiray ihany koa olona efa-dahy manao fitarainana fa nangalarin’ny Ramatoabe iray mitondra basy ny fiarany…
Mba mieritrereta tsara ihany vao manao zavatra, ary indrindra, mivavaha, mba tsy hanaonao foana eo amin’ny fiainana!
Eto Madagasikara, misy biby antsoina hoe tsorakely, any ambanivohitra any anaty hazo no misy azy, Ny volony dia tsy mba malemilemy tahaka ny an’ny biby hafa rehetra, fa tsilo manindrona sady mandratra, ary io no fiarovan-tenany amin’ny fahavalo.
Ny biby rehetra any anaty ela, rehefa ririnina, satria tsy mba manana trano izy ireny, ny fomba tena tsara ahazoany miady amin’ny hatsiaka dia ny fifanakekezana sy ny fiondanana amin’ny namany, mba hisian’ny hafanana.
Rehefa tong any ririnina, mvaniezaka ny tsorakely mba hifanantona, sy hitady hafanana, saingy mifanindrona sy mifandratra izy ireny, noho, ny tsilo izay entiny. Saingy rehefa tsy nanao izany hono izy ireny, dia nisy matin’ny hatsiaka, indrindra rehefa mafy dia mafy ny ririnina. Ny hany heriny dia ny mivondronda iany, miaritra ny ratra sy ny fanaintainana vokatry ny tsilon’ny namana, toy izay ho faty samirery.
Toy izany koa isika olombelona, samy manana ny fahalemeny daholo ny tsirairay avy. Mety misy angamba fihetsika manindrona, teny maharary ataon’ny namanao, nefa tsy vaha-olana ny ady n any fisarahana, fa vao mainka mamono izany. Aoka ho fanatrtao fa ireny tsilo entin’ny tsorakely ireny dia tsy nataony hanafahina ny hafa mihitsy, fa mba ho fiarovan-tena ihany. Aoka heverinao ihany koa fa tsy dia voatery foana akory ho ratsy saina ny olona manana ny fahalemeny, fa izay no mba fantatry ny sainy fa haha-tsara azy. Tsarovy anefa fan a dia mitondra tsilo aza izy, mba misy zavatra tsara anie ao aminy, dia ny hafanàna sy ny fitiavana é. moa tsy toy ny voninkazo atao hoe raozy? Misy tsilo mandratra sy manindrona eo aminy, nefa ahitanao ny voninkazo tsara indrindra sy malaza indrindra eto ambonin’ny tany.
Tahafo ny fiainan’ny TSORAKELY, ka tiava na dia ny fahavalonao aza!
Tany Italie, fahizay, tao amin’ny tanàna iray atao hoe Terni, dia nisy Eveka anankiray tsara fanahy atao hoe Valentin. Na dia teo aza ny fandraràna ny fivavahana kristiana tamin’izany fotoana izany, dia tsy natahotra fa nanatanteraka ny asa maha-Eveka azy, ary tsy nitsahatra nanampy ireo mahantra maro be nila famonjena izy.
Ela ny ela, ren’ny mpitondra fanjakàna ny momba azy, ary tsy ela akory dia voasambotra izy ary natao tany an-tranomaizina.
Tany an-tranony I Valentin, dia nanana voromahailala izay notezainy sy nozariny, tahaka ny alikakely mifankazatra amin’ny tompony. Rehefa tsy nahita an’I Valentin tao an-trano hono ilay voromahailala, dia lasa nandeha nanidina nitady azy hatraiza hatraiza, farany hitany ihany ny tranomaizina nisy azy. Dia tonga mitsidika azy ao foana hono ity vorona, sady mitondra felana voninkazo atao hoe “violety” avy eo an-tokotany, hoan’ny tompony ao am-ponja. Ireo felana violety ireo hono dia efa namboarin’I Valentin taloha nataony sary miendrika fo daholo ary dia nitondra izany isan’andro tany am-ponja ilay voromahailala. Ireny fela-boninkazo ireny hono no nanoratan’I Valentin hafatra ho an’ny namany sy ny olon-tiany, ary dia nataony teo amin’ny vozon’ny voromahailala, ary dia tonga tany amin’ny nandefasana azy ny hafatra.
Hay ve ka tantaran’olo-masina sy fitiavana madio ny Saint Valentin, fa tsy fijangajangàna sy fitiavana maloto e!
46 votes. Moyenne 3.11 sur 5.
I came across nicetmu.e-monsite.com and i love it !
2. Francises RAKOTONIRINA 07/04/2018
Mazava Ny Lesona!